Unyulo olunokwenzeka e-Itali lubethe phantsi iimarike zentengiso | Ezezimali
Unyulo olunokubakho e-Italiya lubethe phantsi iimarike zentengiso
"Ukuba uMbutho ufuna ukubhukuqa urhulumente, mayicace gca," iphendulile inkokeli yeqela elichasayo, uLuigi Di Maio. Eli binzana lisuka kwelinye lamagunya anzima kwisigqeba sase-Itali liye lasebenza ukuze iimarike zezabelo zenze imeko yolonyulo olutsha kwelinye lamagunya ezoqoqosho e-European Union. Ukuya kwinqanaba lokuba amajelo eendaba angayeki ukuba iimfazwe ziphela ngokonakala kwaye, ke, ekubizeni unyulo lwakwangoko Ekupheleni kukaSeptemba. Into abatyali mali abancinci nabaphakathi kwilizwekazi elidala abangayithandiyo.
Kule meko ngokubanzi, impendulo yelinye lamacandelo orhulumente waseRoma khange kube kudala iza. Ngale ndlela, kuye kwacaca ukuba "akukho rhulumente uzakuwa ngomso," utshilo uSalvini, owabhengeza ukuba uza kuthi cwaka, njengesiko lakhe, eholideyini ekupheleni kukaJulayi nonyana wakhe. Kodwa ke enye into ayicingayo amajelo eendaba okoko "urhulumente ebekwinqanaba lengxaki amatyeli aliqela," likhumbula iphephandaba iLa Stampa kwinqaku lomhleli elinomxholo othi "Chronicle of a reported death. Ngayiphi na imeko, yi- imeko entsha abanokuthi bathembele kuyo abatyali mali ukucwangcisa izicwangciso zakho emva, okanye mhlawumbi, ngexesha lasehlotyeni.
Ukuwa kwe-Ibex 35 kwakuseRoma, apho ipremiyamu yomngcipheko wase-Italiya yenyuka yaya kuma-193 eendawo zokubeka imali kwaye ukubhenka lelinye lawona macandelo mabi kwezorhwebo. I-Mib ivale ngokuwa okungaphezulu kwe-2%, ngokuwa kweebhanki eziphambili ze-transalpine: iBanco Bpm phantse i-6%, i-Ubi Banca ene-4,5%, i-Unicredit nge-3% kwaye ekugqibeleni i-Intesa Sanpaolo nge-2%. Okwangoku, kwintengiso yetyala, ipremiyamu yomngcipheko waseSpain ime kumanqaku angama-72, kunye nesivuno kwibhondi yeminyaka eli-10 esihla saya kwi-0,4%. Olunye uphawu lokungaqiniseki kubatyali mali abancinci nabaphakathi.
1 I-Itali: ukungazinzi okutsha kwiimarike zesitokhwe
2 Eyona ntengiso ichaphazelekayo eSpain
3 Iimali zotyalo-mali kwimali engenayo esisigxina
4 Ezona bhondi zaseItali ziyingozi
5 Khetha awona macandelo akhuselayo
I-Itali: ukungazinzi okutsha kwiimarike zesitokhwe
Ngayiphi na imeko, inye into eqinisekileyo kwaye oko kukuba uqoqosho lwase-Itali luphantsi koqwalaselo olusisigxina, njengoko kwamkelwe nguVon der Leyen, intloko entsha ye-European Union, kwaye wonke urhulumente unyanzelekile ukuba athathe amanyathelo angathandwayo ngokuchasene namatyala aphezulu oluntu. Kule meko, ezi ndaba zinokuvelisa utshintsho kwisicwangciso kutyalo-mali lwabasebenzisi kwaye ngokuchanekileyo ngaphambi kokuba bathathe iholide yabo efanelekileyo yehlobo. Kuba, enyanisweni, inokuvelisa iziphumo kwezinye iimveliso zeemarike zezemali. Umzekelo, ekuthengweni nasekuthengisweni kwezabelo kwimarike yemasheya.
Ukuba unyulo lubanjiwe kweli lizwe libalulekileyo, alithandabuzeki elokuba inzuzo yeendlela ezithile zokonga ziya kuchaphazeleka. Sesinye sezizathu zokuba kutheni kufanelekile ukuba ziphonononge ezi mveliso kwaye yintoni ekufuneka yenziwe ukuze ungalahleki kwimisebenzi. Kwaye ukuba ezi ntshukumo zinokwenziwa zenze inzuzo, kubhetele ngakumbi kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Nangona beya kuba licandelo elingesosigxina elingazukuphakama ngokugqithileyo kwaye liza kuba nendawo yalo ebudeni beenyanga zeli hlobo. Apho anokusibamba khona elunxwemeni okanye nakweyiphi na enye indawo yeholide, phumla emva konyaka usebenza.
Eyona ntengiso ichaphazelekayo eSpain
Emva kwe-Italiya, ii-equities zaseSpain ziya kuba zezona zichaphazeleka kakhulu kumazwe e-European Union, njengoko kwenzekile ngolwe-Sihlanu odlulileyo ngokufika kweendaba. Nangona kungekho xabiso likhethekileyo linxibelelene nale ntshukumo, licandelo lebhanki elinokuthi lichukunyiswe kakhulu sesi sithuba kunyulo lwase-Itali. Ukuba kunjalo, kuya kufuneka lungisa izikhundla kwimarike yasekhaya kwaye uye kwabanye ongaphenjelelwanga yile nyaniso yezopolitiko. Thatha, umzekelo, iimakethi zokulingana zaseJamani naseFrance. Ngayiphi na imeko, kuya kuba yimfuneko ukunqanda ukuziveza kwizikhundla zeebhanki, ezona bhanki ziqhuba kakubi ukusukela ngoku.
Kwelinye icala, nangona iintshukumo Banokuphazamiseka kakhulu kwiintsuku zokuqala, kwiintsuku ezimbalwa ubumbeko kumaxabiso esitokhwe esitokhwe amaxabiso aya kuzinza. Ngesi sizathu, ngekhe ubenakho ukukhetha ngaphandle kokwenza ngokukhawuleza okukhulu ukuba awufuni kungena emanzini kwiintshukumo ezinokonakalisa iholide yakho oyifunayo. Ngaphandle kolunye uthotho lokuqwalaselwa kwezobuchwephesha kwaye mhlawumbi ukusuka kwindawo yokujonga izinto ezisisiseko solunye ukhuseleko oluthengiswa esidlangalaleni. Nangona ubulumko kufanele ukuba bube yinto eqhelekileyo kuzo zonke izenzo zakho.
Iimali zotyalo-mali kwimali engenayo esisigxina
Le yeyona mveliso ngoku isesichengeni sokutshintsha imeko yezopolitiko eRoma. Apho iingxowa-mali zotyalo-mali zizezona zinokuthi ngokungathandabuzekiyo zilahlekelwe kakhulu kwesi sihlandlo. Ziimveliso ezidibeneyo Ityala lase-Italiya kunye neebhondi nezinye iiasethi zemali zeempawu ezifanayo. Kwaye xa ubuya kwiiholide, banokukunika isimanga esibi kakhulu. Njengakwimeko yokwehla koonobumba abaya kuthi bohlwaywe kakhulu kwiimarike zemali ukusukela kule mihla.
Ngelixa ngokuchaseneyo, ayinakulityalwa ukuba imali yotyalo-mali yezi mpawu ixhaphake kakhulu kwiipotfoliyo zotyalo-mali ezinabatyali mali abancinci nabaphakathi. ngeprofayili ekhuselekileyo okanye ekhuselayo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba banokudityaniswa neeasethi zemali ezivela kwii-equities. Kuyimfuneko ukwenza ukubek'esweni okhethekileyo kwezi mali ukunqanda ukuba banokohlwaywa ngakumbi kwiakhawunti. Kwaye ukuba kunyanzelekile asikho esinye isisombululo sokudlulisela kwezinye iimali ezikhuselekileyo zotyalo-mali kwezi ntsuku.
Ezona bhondi zaseItali ziyingozi
Le yenye yeemveliso ezinokusuleleka kule meko inokwenzeka kwisizwe se-EU. Ke ngoko, kufuneka uyeke ukwenza nawuphi na umsebenzi de kupheliswe amathandabuzo ngalo mbandela wezopolitiko. Kuya kubakho ixesha lokuvula izikhundla kule klasi yeebond xa iimeko zifuna njalo. Kodwa okwangoku, kungcono ujonge ezinye iiasethi zemali ezikunika ukhuseleko ngakumbi ukugcina nokwenza ulondolozo olunenzuzo. Ukuze ngale ndlela, uchithe iintsuku ezimbalwa uzolile kule holide, eyiyo emva kwayo yonke injongo oyilandelayo kulo nyaka. Akufanelekanga ukubeka emngciphekweni imali kwiibhondi zezi mpawu kuba ungashiya ii-euro ezininzi endleleni.
Ngale ndlela, isisombululo kule ngxaki yemali sikukukhetha i Iibhondi zaseJamani okanye zaseMelika. Ngenxa yesizathu esichanekileyo, banika ukhuseleko olukhulu ngeli xesha. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba basebenze njengendawo ekhuselekileyo yokubamba imali yabatyali mali. Njengoko bebesenza ngokwesiqhelo kwiminyaka yakutshanje ngamaxesha okungazinzi okukhulu kwiimarike zezemali. Olu luvo olunokuba luncedo kakhulu ekukhuseleni umdla wakho kwezi ntsuku zinzima kwilizwe lemali. Apho kuya kufuneka ukhawuleze kakhulu ukuze ube nenzuzo ngempumelelo ethile.
Khetha awona macandelo akhuselayo
Ngayiphi na imeko, ukuba eyona njongo yakho kukusebenza ekuthengweni nasekuthengisweni kwezabelo kwimarike yemasheya, unesinye isicwangciso sotyalo mali esilula kakhulu ukusenza ukusukela ngoku. Imalunga notyalo-mali kwezona ndawo zokuzikhusela zeemarike zezemali kwaye ezingakhuselekanga kakhulu kwezona ntshukumo zinamandla xa kuthelekiswa namaxabiso. Ngale ndlela, isindululo semarike yestokhwe esihle sihlala kwi iinkampani zamandla, oohola bendlela okanye imixokelelwane yokuhambisa ukutya. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba banokwenza ngcono kunakwamanye amacandelo eshishini.
Ngelixa kwelinye icala, esinye isisombululo kule ngxaki siza kuqala kwindlela esekwe kwingqokelela yezahlulo. Ngenzuzo leyo Amanqanaba aphakathi kwe-3% ne-8% kwaye apho unokufumana khona ukhuseleko oluninzi lwamacandelo esitokhwe akhankanywe apha ngasentla. Ngokuhlawulwa okungagungqiyo kwaye kuqinisekisiwe minyaka le, nantoni na eyenzekayo kwiimarike zezemali. Ukuba yindlela yokwenza ipotifoliyo yengeniso esisigxina ekhethekileyo kwiyantlukwano. Kodwa kwimeko yokunciphisa umngcipheko ngendlela ebetha kakhulu. Inikwe into enokwenzeka kwilizwe lesiLatin kwiinyanga ezizayo.
Nokuba yeyiphi na imeko, yimeko ekufuneka uyithathele ingqalelo kwezi ntsuku ukuze uhlengahlengise ipotifoliyo yakho yotyalo-mali kwaye ungalahli mali kwimisebenzi evulekileyo. Kuba, enyanisweni, ungathatha isimanga esingalunganga kwezi veki ukuba kufuneka uphephe kuzo zonke iindleko ngesicwangciso esithile kunye nokunciphisa umngcipheko ngaphezulu kwezinye izinto eziqwalaselwayo. Akumangalisi ukuba iimarike zezemali ziyazi kakuhle into enokwenzeka kurhulumente wase-Italiya ukusukela ngoku. Apho imarike yemasheya yaseSpain iya kuba yenye yezona zichaphazelekayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Unyulo olunokubakho e-Italiya lubethe phantsi iimarike zentengiso
Ugcina malini ngokuthenga i-inshurensi?
Indalo yoqoqosho olukhulu kwimarike yemasheya